Ndingayikhuphela njani imifanekiso ye-Instagram kwikhompyuter yam? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 245
Ngamanye amaxesha xa sijonga inethiwekhi yethu siyifumana imifanekiso esinokuyithanda gcina okanye wabelane nje kwezinye iinethiwekhi, kwimeko ye-Instagram akukho lula kangako, khuphela le mifanekiso singathanda ukuyigcina okanye sabelane ngayo kakhulu.
Kule nqaku siza kukufundisa njani Ukukhuphela le mifanekiso okanye iividiyo ukusuka kwi-Instagram ukuya kwikhompyuter yakho, kufuneka ukhumbule ukuba esi sicelo asizukuvumela ukuba ubone ukhuphelo ngokuthe ngqo ukuze usebenzise iinkqubo zomntu wesithathu Emva koko, siza kukunika iindlela ezininzi.
Khuphela ngaphandle kweapps:
IsiNgesi kwiakhawunti yakho Instagram kwikhompyuter yakho ngendlela eqhelekileyo, Oko kukuthi, ngamagama wakho abasebenzisi kunye neephasiwedi zakho zobuqu.
Khangela umfanekiso ofuna ukuwugcina, ukhethe ukhetho olumakishwe njenge Msgstr "Vula kwithebhu entsha."
Yiya kule festile entsha, khetha ifayile ye Idilesi ye-URL, ebonakala kumgca ophezulu webrawuza.
Kwi-URL kufuneka wongeze Okulandelayo: "/ media / / size = l", ucinezela iqhosha lasekunene le mouse yakho kwaye ugcine olu lwazi.
Le app yile ngokupheleleyo simahla kwaye isebenze kakhulu xa kuziwa ekukhupheleni imifanekiso.
Eyokuqala into ekufuneka uyenzile ukuyikhuphela kwaye uyifake ngokuchanekileyo kwi-PC yakho.
Nje ukuba isicelo sifakwe, Ungena kwi-Instagram yakho kwaye ukhethe umfanekiso ofuna ukuwugcina.
Khangela ikhonkco lomfanekiso sika kwaye uncamathisele kwisikhangeli sesicelo kwaye ucinezele ukhetho lokukhuphela.
La ucinga iya kugcinwa kwiPC yakho.
Ngesi sixhobo Isimahla Ayisiyiyo kuphela into yokukhuphela iifoto kunye neevidiyo kwi-Instagram, unokukhuphela i-IGTV kwi-PC yakho.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile khuphela kwaye uyifake ngokuchanekileyo kwi-PC yakho.
Nje ukuba isicelo sifakwe, ufaka i-Instagram yakho kwaye ukhethe umfanekiso, ividiyo okanye IGTV ofuna ukuyigcina.
Khangela ikhonkco lomfanekiso, ividiyo okanye i-IGTV, yinqumle kwaye uyincamathisele kwiinjini yokukhangela yesicelo kwaye ucofe ukhetho lokukhuphela.
Umfanekiso, ividiyo okanye IGTV iya kugcinwa kwiPC yakho.
Inomdla kwesi sicelo kukuba awuzukufuna iinkqubo ezininzi ngexesha lokukhuphela nokuba kwiPC yakho okanye kwiselfowuni.
Olu lolunye lwezicelo ozithandayo zabasebenzisi be-Instagram xa ukhuphela imifanekiso bafuna ukugcina.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuyikhuphela kwaye uyifake ngokuchanekileyo kwi-PC yakho.
Nje ukuba isicelo sifakwe, ufaka i-Instagram yakho kwaye ukhethe umfanekiso ofuna ukuwugcina.
Khangela ikhonkco lomfanekiso yinqumle kwaye uyincamathisele kumfumani wesicelo kwaye ucinezele ukhetho lokukhuphela
Umfanekiso ngu izakugcina kwiPC yakho
Into ekufuneka uyenzile kukurejista, nangona ingakulungelanga abasebenzisi abaninzi, le Ukuphazamiseka okuncinci ngezibonelelo ozinikayo xa ukhuphela iifoto okanye iividiyo.
Siyathemba ukuba oku ulwazi iluncedo xa ukhuphela imifanekiso kunye nevidiyo kwi-Instagram.
1 Okukhethwa kukho:
2 Khuphela ngaphandle kweapps:
3.2 Ukusetyenziswa kwayo:
4.1 Ukusetyenziswa kwayo:
Ndifuna ukutshintsha iphasiwedi yam ye-Facebook